सातामा करिब २ अर्बको कारोबार - Naya Patrika
सातामा करिब २ अर्बको कारोबार
गत साता नेपाली धितोपत्र बजारमा करिब २ अर्बको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । निरन्तर ओरालो लागेको बजारमा सेयर मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तिएको छ । राम्रा कम्पनीहरूको सेयर पनि सस्तिएपछि बजारमा त्यस्ता कम्पनी छानी–छानी खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूको बढेको छ । यसले कारोबार रकममा वृद्धि भएको हो । कारोबार रकम बढे पनि गत साता नेप्से परिसूचक ४० दशमलव ९९ अंक घटेको छ ।
गत साता पाँच कारोबार दिनमध्ये चार कारोबार दिनका लागि मात्र बजार खुला गरेको थियो । सो चार दिनमध्ये तीन कारोबार दिन बजार ओरालो लागेको छ भने एक कारोबार दिन बढेको थियो । नयाँ सरकार विस्तार प्रक्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका दिन बजार ५ अंक बढेको थियो । तर, सो गतिलाई निरन्तरता दिन नसक्दा बजार अर्को दिन पुनः ओरालो लागेको थियो ।
सेयर आपूर्ति बढे पनि बजार विस्तारका कार्यहरू नहुँदा नेप्से उकालो लाग्न सकेको छैन । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै निक्षेप संकलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । यसले बजारलाई थप ओरालो लाग्न दबाब सिर्जना भएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको १४ दिने आरएसआई ३२ दशमलव शून्य ४ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्छ ।
गत साता १ सय ७४ कम्पनीको १८ हजार ७५ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख ७१ हजार रुपैयाँबराबरको ४५ लाख २६ हजार ५ सय ५० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अघिल्लो साताको तुलनामा गत साताको कारोबार रकम १५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो साता १ सय ७६ कम्पनीको १८ हजार ६ सय ४ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ७० करोड ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबरको ४२ लाख ४८ हजार ७ सय ३० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो ।
अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार ३ सय ६ दशमलव ९८ बिन्दुमा बन्द भएको बजार गत साताको बिहीबार १ हजार ३ सय ४५ दशमलव ९९ बिन्दुमा बन्द भएको छ । परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २८ दशमलव ७४ अंक घटेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ५ दशमलव २० अंक घटेर २ सय ५ दशमलव ३ बिन्दुमा पुगेको छ । गत साता उन्नति माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकृत गरेको छ ।
गत साता कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । बिमा समूहको परिसूचक गत साता सर्वाधिक २ सय ७६ दशमलव ३४ अंक घटेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् समूहको परिसूचक ५९ दशमलव २२ अंक, होटेल समूहको ५४ दशमलव ५४ अंक, लघुवित्त समूहको ५१ दशमलव ७१ अंक, उत्पादनमूलक समूहको ४७ दशमलव ४९ अंक, विकास बैंक समूहको ३० दशमलव ३३ अंक, वाणिज्य बैंक समूहको १८ दशमलव २७ अंक र वित्त समूहको परिसूचक १२ दशमलव ५१ अंक घटेको छ । कारोबारमा आएको व्यापार समूहको परिसूचक ८ दशमलव ५३ अंक र अन्य समूहको ७ दशमलव २२ अंक घटेको छ ।
गत साता कारोबार रकम र कारोबार संख्याका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सेयर संख्याका आधारमा भने प्रभु बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो साता नेपाल लाइफको १ हजार ८ सय २६ पटकको कारोबारमा २२ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । प्रभु बैंकको गत साता ८ लाख १२ हजार कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ ।
फस्र्टको हकप्रद निष्कासन खुला
फस्र्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुन १८ गतेदेखि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका २२ लाख ८१ हजार ३ सय १३ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति चैत २३ गते रहेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, फस्र्ट माइक्रो फाइनान्सका शाखा कार्यालय र आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । माघ ८ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले सो हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडले चैत १२ गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा २१औँ वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभामा ७ दशमलव ३६८ प्रतिशत (करसहित) वितरण गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र लेखापरीक्षण गरिएको आर्थिक विवरण पारित गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले फागुन १८ गतेदेखि चैत १२ गतेसम्म सेयरधनी दर्तापुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ ।
कामना सेवाको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले १० बराबर १ दशमलव ५ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज (फागुन २० गते) अन्तिम दिन हो । बैंकले माघ १५ गतेदेखि प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका ३० लाख ९४ हजार १ सय ५४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सेयरधनीहरूले एनएमबी क्यापिटल, कामना सेवा विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, एनएमबी बैंकका शाखा कार्यालय र आस्बा सदस्य कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड २७ लाख ६९ हजार ८ सय ४८ दशमलव ९५ रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँडपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३६ करोड २१ लाख ८५ हजार ३ सय २६ दशमलव २९ रुपैयाँ पुग्नेछ । माघ २ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले सो हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।